အဘယ်သူမျှမ, Greta အန္တိခရစ်မဟုတ်ပါဘူး | Apg29
အဘယ်သူမျှမ, Greta အန္တိခရစ်မဟုတ်ပါဘူး
ငါစာရေးဆရာ 16 နှစ်အရွယ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှ
ရုပ်ပုံ: allas.se ။
ငါတစ်စုံတစ်ဦးကိုပြန်လည်ရှင်သန်မှုလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူရာသီဥတုလှုပ်ရှားမှုနှိုင်းယှဉ်သောနေ့သတင်းစာအတွက်အစောပိုင်းကယနေ့ဖတ်ပါ။ သို့သော်ပြန်လည်လှုပ်ရှားမှုတွေသင်သည်ရာသီဥတုလှုပ်ရှားမှုအတွင်းရမထားတဲ့မျှော်လင့်ချက်, get ။
ငါစာရေးဆရာ 16 နှစ်အရွယ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုပ်ရှားသူ Greta Thunberg အန္တိခရစ်သည်ဖြစ်စေအံ့ဘွယ်သောအဘယ်မှာငါ့ထံသို့စေလွှတ်ခဲ့သည်စာဖတ်သူကအီးမေးလ်ခဲ့ကြပြီ။ ထိုမေးခွန်းကိုငါချက်ချင်းဖြေကြားနိုင်သည်
"မဟုတ်ပါ Greta Thunberg အန္တိခရစ်မဟုတ်ပါဘူး။ "
Greta အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ကျမ်းစာကအန္တိခရစ်သည်လူကိုကြောင်းပြောပါတယ်, ဒါကြောင့်ထင်ကြေးချက်ချင်းကျရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာကျမ်းစာနဲ့ကိုက်ညီသည်မဟုတ်။
2 Thes 2:3။ အဘယ်သူမျှမဆိုလမ်းထဲမှာသင်လှည့်ဖြားကြကုန်အံ့။ ထိုနေ့ရက်သည်များအတွက်စွန့်ပစ်ထားပြီးလုပ်ထားပြီးမဟုတ်လျှင်မဟုတ်ကြလိမ့်မည်ကိုနှင့်အပြစ်တရား၏အချင်းလူသား, perdition သား [လူတ ie] ထင်ရှားပြီ။
သင်တန်း၏ငါမစာဖတ်သူကိုအီးမေးလ်ကိုထုတ်ဝေ။ mejlets အကြောင်းအရာစာဖြစ်ပါသည်အပြင်, ငါသည်လည်း lynched မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါနောက်ဆုံးအရာထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Greta Thunberg ဝေဖန်ဖို့ပုံမဟုတ်ပါဘူး။
ယခုတွင်ငါသည်မိန်းမအားမိုက်မဲသောအရာတို့ကိုဆိုပါတယ်သူတစ်ဦးဘောလုံးနည်းပြရဖတ် ပစ်ခတ် ။ သေချာတာပေါ့, မသင့်လျော်သောဘာသာစကားခဲ့, သင်မူကားငါအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုနားလည်ပါသည်။ ယခင်ကငါအမေရိကန်ရုပ်မြင်သံကြားကနေကလစ်မြင်ကြပြီ, ငါကချက်ချင်းစကားနှင့်အခြားသောသူအားဖြင့်ပယ်ကြားပြောလေ၏ခဲ့သူအသက် 16 နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးဝေဖန်ရှိရာက, ဖြစ်ခဲ့သည်ယုံကြည်:
သူမသည်သာကလေးတစ်ဦးသည်မဟုတ်, သူမလည်းကျနော်ယခင်ကအပေါ်ဘတ်ရသောသုံး diagnoses ရှိပြီး ဝီကီပီးဒီးယား နိုင်ရန်အတွက်, ဒါပေမယ့်အခုကပဲသူမတစ်ဦးရှိခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ် "အခညျြးနှီး၏ပြင်းထန်သောစိတ်ကျရောဂါနှင့်အတွေ့အကြုံရှိခံစားချက်များကို," နှင့်သူမ၏ 2018 decided " အစားပြန်စိတ်ကျရောဂါသို့ကျသွား၏, အရေးယူသို့သွားပါ။ "
သငျသညျဝေဖန်လိုလျှင် Greta တစ်ဦးနေမကောင်းကလေးကဝေဖန်စွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်။ ဤနည်းက Greta Thunberg န်းကျင်လှုပ်ရှားမှုဆန့်ကျင်ဝေဖန်မှုများ၏ပုံစံအားလုံးကိုရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်။
၏သင်တန်းကသူမကဒါလူသိများဖြစ်လာသည်အတိုင်းပြုပေမယ့် bokomliggande တပ်ဖွဲ့များနှင့်စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်ခဲ့သူသူမကမဟုတ်ဘူး။
နှင့်အဖိုးတန်လူ့ဖြစ်လျက်ရှိ - - သညျယရှေုခရစျသလိုအပျသူငါသူမကလေးတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်, Greta ဝေဖန်ကြပါဘူး။ အဘယ်သို့ငါအခြေခံအကျိုးစီးပွားနှင့်တပ်ဖွဲ့များကဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်ခဲ့သည်။ ငါ Greta Thunberg ကိုမြင်လျှင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကျွန်မချက်ချင်းစိတ်ဆိုးခဲ့ပါတယ်။
ထိုအခါ Greta ဒါကြီးမားတဲ့ဖြစ်လာမသေးငါဒါတုံ့ပြန်။ ဒါဟာအားလုံးမီဒီယာနောက်ကွယ်မှဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူမ၏အထိကိုက်ညီသောထူးဆန်းသည်။ ထိုအကြောင်းပြချက်များအတွက်တစ်ဦးချင်းစီလွဲတစ်ခုခုရှိကွောငျးကိုနားလည်သင့်တယ်။
အပေါ် Greta သူသည်တောင်မှငါ့အ 13 နှစ်အရွယ်သမီး, Instagram ကို , သူမ၏ထင် ကုလမိန့်ခွန်းကိုအတုခဲ့ , ငါဘာမှမပြောပါရန်အချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်မတိုင်မီသူမကအတော်လေးကောက်ကာငင်ကာငါ့ကိုပြောတယ်။
သင်ရုံတစ်နေမကောင်းကလေးကဝေဖန်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသူမ၏ထွက်စေလွှတ်ပြီလာသောအခါဒါ Greta Thunberg နောက်ကွယ်မှရှိသူများမတ်ပဲ!
ထိုမိန်းမရဖို့အရာအားလုံးကို၏ထိပ်ပေါ်မှာကြီး ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆု ရဆုံးကအတုကြောင်းကိုနားလည်သင့်တယ်။ ယခင်ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်ရာသီဥတုလှုပ်ရှားသူ အယ်လ်ဂိုး, မိမိဖန်ဆင်းတဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များအတွက်ဆုရရှိခဲ့သည်။ ငါသည်သူ၏ရုပ်ရှင်အတွက်ဟောကိန်းများဖြစ်ကြောင်းကိုဖတ်ပြီးကြပါပြီ မုသာစကားနှင့်မပြည့်စုံလာ ။
ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင်သင်သည်သင်သာကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုကယ်တင်သောဆယ်နှစ်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ တူညီသော Greta နှင့်အခြားကလေးများသူမ၏ဟောင်းတဦးကပြောပါတယ်အတူတူပါပဲပြောပါတယ်။ ထိုအကအကြောင်းများအတွက်ခဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 30 - 20 ,
မြေကြီးတပြင်ဆယ်နှစ်ကျော်မသွားပါလိမ့်မယ် - မရ 20 သို့မဟုတ်အနှစ် 30 ။ ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောမက်ဆေ့ခ်ျနှင့်အတူကြွလာသည်ဟုပျက်စီးခြင်းအပေါငျးတို့သညျပရောဖကျအတုအယောင်ဖြစ်ကြသည်။ ပထမ, ယရှေုပြန်လာရမယ်, သူသည်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိသောယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်လာလိမ့်မည်!
မြေဆီလွှာအောက်မှာသွားပြီလျှင်, ယရှေုအဘယ်သူမျှမပြည်သို့ပြန်သွားဖို့။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သကမ္ဘာပျက်ပရောဖက်ပြုဒီလိုမျိုးအယူမှားဖြစ်ကြောင်းနားလည်ပါသည်။
ဒါပေမယ့်အပြီးသညျယရှေုထို့နောက်သူကအသစ်တစ်ခုကိုမိုဃ်းကောင်းကင်ကသစ်နှင့်မြေကြီးဖြစ်လိမ့်မည်, မိမိပြန်လာပြီးနောက်အနှစ်တထောင်ဘို့ကိုမြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံလေ၏ခဲ့သည်! သို့ရာတွင်အဘယ်သူမျှလုယူဖျက်ဆီးခြင်းရှိပါလိမ့်မည် - ကတစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
တစ်စုံတစ်ဦးကပင် Greta Thunberg ဖို့ဘုရားကျောင်းမဂ္ဂဇင်း၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ထားပြီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ညျပရောဖကျ ။ အဘယ်သူမျှမသူမကပရောဖကျတမဟုတ်ပါဘူး။ သူမဆဲပရောဖက်ဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟုဆိုပါက - ထိုမိစ္ဆာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုခရစ်နှင့်မျှော်လင့်ချက်နှင့်ကယ်တင်ခြင်းမရှိပဲနေသော Greta လောအဖြစ်မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောသတင်းစကားအတွက်မျှော်လင့်ချက်၏ပရောဖကျကိုပရောဖက်ပြု။
သုတ္တံ 23:18 ထိုသူ: အကယ်စင်စစ်သင်သည်အနာဂတ်ကဲ့သို့၎င်း, သင့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်အချည်းနှီးဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ယေရမိက 29: 1: ငါသည်သင်တို့ကိုအနာဂတ်နှင့်မျှော်လင့်ချက်ပေးစေခြင်းငှါ, သင်တို့အဘို့ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏, အတှေးအငြိမ်သက်ခြင်း၏အနှင့်မမကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးငါရှိသည်အစီအစဉ်များကိုသင်တို့သိကြ၏။
သုတ္တံ 24:14: ဒီတော့သင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်များအတွက်ဗဟုသုတနှင့်ပညာရှိ၏။ သူတို့ကိုသင်ရှာတွေ့ပါကသင်သည်အနာဂတ်ရှိသည်, နှင့်သင့်မျှော်လင့်ချက်အချည်းနှီးဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ယေရမိ 31: 1: မျှော်လင့်ချက်သင်၏အနာဂတျအတှကျရှိပါတယ်, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။ သင်၏သားသမီးတို့သည်မိမိတို့၏တိုင်းပြည်ပြန်လာကြလိမ့်မည်။
ငါတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူရာသီဥတုလှုပ်ရှားမှုနှိုင်းယှဉ်သောနေ့သတင်းစာအတွက်အစောပိုင်းကယနေ့ဖတ်ပါ ပြန်လည်ရှင်သန်မှုလှုပ်ရှားမှု ။ ဒါပေမယ့်ခရစ်ယာန်ပြန်လည်လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်သင်ရာသီဥတုလှုပ်ရှားမှုတွင်မရကြဘူးသောမျှော်လင့်ချက်အရဗဟိုမှာယရှေုရှိသည်။
ဒါပေမယ့်ရာသီဥတုလှုပ်ရှားမှုဘာသာတရားဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ": ငါခေါင်းစဉ် YouTube ပေါ်မှာဗွီဒီယိုတစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့ | အသစ်ရာသီဥတုဘာသာတရားကိုအစိမ်းရောင် Revival " ။ Lars Bern Swebb ရုပ်မြင်သံကြားခေါ်ဆိုမှုများအတွက်ပင် Greta Thunberg ရဲ့ရာသီဥတုရွေ့လျားမှု ကမ္ဘာပျက်အစွန်းရောက် ။ ဂိုဏ်းမှာတော့ကျနော်တို့ကလူဘောင်းနှင့် downtrodden သိရပေမယ်ယေရှုခရစ်၌, လူတွေအခမဲ့သတ်မှတ်ထားကြသည်။
ကျွန်တော်နောက်ကျောဤဆောင်းပါး၏အစအဦးမှသွားလျှင်, ၏သင်တန်း, Greta Thunberg အန္တိခရစ်သည်မဟုတ်။ အဲဒီမှာလွန်းအီးမေးလ်များကိုပရင်တာကိုဖတ်ရှု။ အီးမေးလ်ထဲမှာသူနောက်ဆုံးအမည် 666 နှင့်အရောင်အစ္စလာမ့်အစိမ်းရောင်နဲ့တူကြောင်းထိုကဲ့သို့သော Greta မှတက်အဖြစ်အမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီ။
သို့သော်အခြားတစ်ဖက်ပေါ်တွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုပ်ရှားမှုအန္တိခရစ်၏ပစ်လွှတ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လာမယ့်အန္တိခရစ်ရာဇပလ္လင်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုပ်ရှားမှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာခိုင်မာတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိပါတယ်။ လေတပ်လှုပ်ရှားမှုကိုလုံးဝအပြစ်မကင်းသည်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုမှာတော့လူတွေကစော်ကားခံရနိုင်ပြီးတစ်ဦးအဆိုးမြင်ဂိမ်းထဲမှာ pawn ဖြစ်။
ကျွန်မကိုလည်းစကားလုံးကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပာယ်ကိုပေးဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ တခါတရံငါ Greta "ပညာရေးသပိတ်" ဟုအဆိုပါကျောင်းမှသပိတ်၏မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါသည်အခါဖတ်ပါ။ ဘယ်လိုသူမကထိုကဲ့သို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအဖြစ်, တခြားနိုင်ငံမှာကျောင်းကဒဏ်ခတ်နိုင်သနည်း
သို့မဟုတ်ပါက "သပိတ်" သို့မဟုတ် "ရာသီဥတုသပိတ်" ကိုခေါ်ပါ။ ဒါဟာအနည်းငယ်သပိတ်၏မေးခွန်းတစ်ခုသည်မဟုတ်, ဆန္ဒပြပွဲများနှင့်ဝါဒဖြန့်။ သင်ကဘာလဲဆိုတာအဘို့အမှုအရာတို့ကိုမခေါ်သင့်ပါတယ်။ သို့သော်ဤလမ်းအတွက်သူတို့တစ်တွေအခြို့သောဦးတည်ချက်အတွက်သူတို့ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့လူရဲ့စိတ်အတွင်းစိတ်ကူးများနှင့်သဘောတရားများကိုမျိုးစေ့ကိုကြဲ။
Greta Thunberg မေးပါ နှင့်မျှမတို့မျှော်လင့်ချက်ရှိသည်သောသူအပေါငျးတို့သညျအခွားလူတို့အဘို့ဆုတောင်းကြလော့။ သူတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဘုန်းပွင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုနားမထောင်သောကြောင့်သူတို့ကသူ့ကိုလက်ခံကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်နိုင်အောင်သာသနာပြုအရာ၌နှင့်သခင်၏အခြားအစေခံကျွန်သူတို့ကိုပေးပို့မည်အကြောင်းဆုတောင်း!
မဿဲ 9:38 ။ ထိုကြောင့်သူသည်စပါးရိတ်ရာကာလသို့အလုပျသမားအထဲကစေလွှတ်မည်အကြောင်း, သခင်ဆုတောင်းကြလော့။
ငါသညျလညျး, ငါကယဇ်ပုရောဟိတ်ခဲ့ယုံကြည်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးကိုယ်စားလှယ်ကြောင့်တစ်နေရာရာကိုဖတ်ပြီးကျနော်တို့ဒီနေ့အရေးကြီးဆုံးပြဿနာရာသီဥတုသို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်ကဆိုသည်။ အဘယ်သူမျှမကအဓိကပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ အဓိကပြဿနာကလူသညျယရှေုကိုလက်မခံဖို့နဲ့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်လိုအပ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။